RW Rooble oo si adag uga hadlay kiiska Ikraan | KEYDMEDIA ONLINE
RW Rooble oo si adag uga hadlay kiiska Ikraan
Ra'iisul Wasaaraha wuxuu Farmaajo iyo kooxdiisa caddaalad ka cararka ah uga digay isku day kasta oo lagu marin habaabinayo Kiiska lkraan Tahlil.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, ayaa sharci darro ku tilmaamay waraaq xalay ka soo baxday Xaafiiska Farmaajo, oo lagu magacaabay guddi baaraya kiiska Ikraan Tahliil Faarax, oo ku maqan gacanta hoggaankii hore ee NISA tan iyo 26-kii Juun.
“Gal dacwadeed maxkamad horyaalla in loo magacaabo guddi baaris waa arrin baal marsan Dastuurka iyo shurcuucda dalka, saxna ma aha in hay'ad xubno ka tirsan oo dacwad loo heysta ay qeyb ka noqdaan baarayaasha kiiska taas oo liddi ku ah caddaalad u helidda qoyska Ikraan Tahalill Faarax, Sidaa awgeed”. Ayaa lagu yiri waraaq ka soo baxday Rooble.
Waraaqda uu soo saaray RW Rooble, ayaa lagu amray Xeer ilaalinta, Maxkamadaha Ciidamada Qalabka Sida ee gacanta ku haya gal dacwadaeedka kiiska Ikraan in ay dardar galiyaan si ay qoyskeedu u helaan caddaalad madax bannaan oo ka maran faragalinta hay'adaha fulinta.
“Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu farayaa Taliyayaasha Ciidamada Qalabka Sida in ay ka fogaadaan talaabo kasta oo wax u dhimi karta sumcadda ciidamada, dhaawicina karta kalsooni shacabka Soomaaliyeed”. Ayaa sidoo kale lagu yiri warka ka soo baxay Rooble.